musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau » 2021 Antigua Classic Yacht Regatta yakanzurwa
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Caribbean • Kurwisa • Shamwari dze eTurboNews • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kune echachtical yachts atove muAntigua, isu tiri kutarisira kubata zvisina kurongwa kufamba nechikepe chete kupera kwevhiki pakupera kwaApril gore rino.
Iyo Antigua Classic Yacht Regatta ndiyo yekutanga kosi yechikepe chiitiko cheCaribbean chinokwezva huwandu hwakawanda hweClassics gore rega.
COVID hutachiona nezvibvumirano zvaita kuti 2021 Antigua Classic Yacht Regatta isakwanise
Varongi veRegatta vanovimba kuti zvese zvichadzokera pane zvakajairwa muna 2022
Sachigaro uye komiti yeAntigua Classic Yacht Regatta vaburitsa chirevo chinotevera nhasi:
“Tange tichitarisira kuti tese tinogona kufamba nechikepe asi zvinosuwisa kuti hutachiona hweCOVID nezvibvumirano zvaita kuti izvi zvikone.
Sachigaro we Antigua Classic Yacht Regatta, Carlo Falcone uye komiti vafunga kudzima 2021 ACYR uye vanovimba kuti zvese zvichadzokera pane zvakajairika muna 2022. Kune echachtical yachts atove muAntigua, tiri kutarisira kubata zvisina kufanira kufamba nechikepe chete kwevhiki kupera kwaApril gore rino uye rumwe ruzivo pane izvo zvinotevera kana zvichibvira.
Tinotarisira kukuchingamidzai mose kuAntigua munguva yechando inotevera. ”
Antigua Classic Yacht Regatta ndiyo yekutanga kosi yechikepe yeCaribbean inokwezva huwandu hwakawanda hweClassics gore rega rega kubva kumativi ese epasi. Mune ayo makumi matatu nematatu edition gore rinouya, chiitiko ichi chinonakidzwa neakasiyana akasiyana emakwikwi anosanganisira echinyakare hunyanzvi kubva kuzvitsuwa, mazambiringa, echinyakare uye enhoroondo keteni, sloops, schooners uye yawls inogadzira huwandu hwengarava, Tall Zvikepe uye nezvimwe zvichangovakwa -Mweya weMweya Tsika yachts uye Dragon kirasi.